Meelo aad u qabow oo umuuqda wax aan macquul aheyn in dadku ku noolaadaan | Saadaasha Shabakadda
Meelo aad u qabow oo umuuqda wax aan macquul aheyn in dadku degaan
David melguizo | | Saadaasha hawada, Hirar qabow
Oymyakon xilliga qaboobaha, Siberia, Russia
Qabowgu wuxuu ku soo noqdaa inuu nagu soo booqdo waana ku habboon tahay in la xusuusto in marar badan aan ka cabanno ku-xigeen. Tan awgeed, waxaan eegi doonnaa meelaha ugu qabow meeraha halkaasoo, in kasta oo ay u muuqato wax aan caadi ahayn, dadku ku nool yihiin sanadka oo dhan.
Muwaadiniinta meelaha sida Verkhoyansk, Yakutsk o Oymyakon (labaduba Ruushka) waxay ku nool yihiin nolol aad uga duwan kuweenna, ugu yaraan xilliga qaboobaha. Tusaale ahaan, wadayaasha magaalooyinkan waxay uga tagayaan gawaaridooda jeexjeexan goobaha gawaarida la dhigto saacado badan inta ay wax iibsanayaan ama hawlo socdaan, iyagoo badanaa kuleyliya saliida saliida leh gawaaridooda dabeyl si ay u dhalaalaan.
La heerkulka ugu hooseeya ee abid la diiwaan geliyo dusha sare ee dhulka, sidaan uga hadalnay maqaalka maalmo yar ka hor, wuxuu ka dhacay aag u dhow buurta Antarctic, oo gaareysa qiyam ka hooseeya 92ºC habeen jiilaal cad. In kasta oo magaalooyinka aan qori doonno midkoodna uusan gaadhin heer-kulkan, haddana qaar ka mid ahi waxay khatar ku yihiin qiyamkan. Kuwani waa labada goobood ee ugu qabow meeraha.
Marka loo eego tirakoobkii 2002, Verkhoyansk (Russia) waxaa daganaa 1434; dadka awood u leh inay noloshooda kula qabsadaan cidlada Siberia ee qoto dheer. Magaaladan waxaa loo aasaasay qalcad 1638 waxayna u adeegtaa xarun goboleed loogu talagalay dhaqashada lo'da iyo soo saarista dahab iyo daas. Waxay ku taal 650 km Yakutsh iyo 2400 km dhanka woqooyi. Verkhoyansk waxaa loo isticmaali jiray in lagu xareeyo maxaabiis siyaasadeed intii u dhaxeysay 1860 iyo bilowgii qarnigii la soo dhaafay.
Layaab maleh, maxaabiista waxaa loo doortay in loo diro Verkhoyansk. Bishii Janaayo celceliska heerkulka wuxuu ku saabsan yahay 45ºC wax ka hooseeya eber, iyo inta u dhexeysa bilaha Oktoobar iyo Abriil celceliskan wuxuu ka hooseeyaa heerarka qabowga. Sanadkii 1982, dadka deggan waxay diiwaangeliyeen kuleyl ku dhowaad 68ºC oo ka hooseeya eber, heerkulka weli ah kan ugu hooseeya ee abid lagu gaaro meeshan. Heer-kulubyadan waxay ka dhigan yihiin in xilliyada qabowga dadku aysan dibadda u bixin dhowr maalmood.
Dadka deggan Oymyakon waxay na xusuusinayaan, goorta Verkhoyansk ay sheeganeyso inay tahay meesha ugu qabow waqooyiga hiiraan, in magaaladoodu sidoo kale diiwaangelisay heerkul dhan 68ºC oo ka hooseeya eber Febraayo 6, 1933. Waxay kuxirantahay cidda aad weydiiso, inta udhaxeysa 500 iyo 800 dadku waxay ugu yeeraan Oymyakon guriga. Oymyakon waxay ku taalaa wado sadex maalmood u jirta Yakutsk, caasimada jamhuuriyada Saja ee bariga Siberia. Meeshan dugsiyadu waxay ku sii furan yihiin heerkul ka hooseeya 46ºC oo ka hooseeya eber.
Magaaladaani waxay magaceeda ka soo qaadatay il biyo kulul, oo qaar ka mid ah dadka degan ay u isticmaalaan qasabad biyo kulul, jabinaya lakab baraf ah oo baraf ah oo qariya xilliga qaboobaha. Guddiga Dalxiiska ee Oymyakon wuxuu magaaladan u soo bandhigayaa inay tahay meesha ugu habboon ee loogu talagalay dadka safarka ah ee u soo halgamaya dalxiiska ee jecel khibradaha ba'an.
Kuwani waa labada xaaladood ee ugu ba'an, laakiin waxaa jira meelo kale oo adduunka ah oo qabowgu ka dhigo nolosha iyo caadooyinka dadkeeda, ugu yaraan, mid gaar ah.
Macluumaad dheeraad ah: Heerkul aan caadi ahayn oo sarreeya meesha ugu qabow, Heerkulka ugu hooseeya ee abid laga diiwaan geliyo dhulka
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Hirar qabow » Meelo aad u qabow oo umuuqda wax aan macquul aheyn in dadku degaan
Daruuro waaweyn oo muddo dheer soconaya ayaa wasakhaysan
Heerkulka ugu hooseeya ee abid laga diiwaan geliyo dhulka